Sakafo ovy mamy, lazainay aminao ny fomba hampihenana lanja amin'izany sakafo | Nutri Diet
Ity dia sakafo natokana ho an'ireo izay mila manamboatra sakafo mba hampihena ny lanjany satria matavy loatra izy ireo ary mpankafy ovy mamy. Azonao atao mandritra ny 1 herinandro farafaharatsiny, hahafahanao mampihena ny lanjany manodidina ny 2 kilao. Ankehitriny, tsy maintsy manana fahasalamana salama ianao hampiharana azy.
Raha tapa-kevitra ny hanatanteraka an'ity drafitra ity ianao, dia tsy maintsy misotro rano 2 litatra isan'andro na inona na inona laninao amin'ny sakafo, hamamiana ny fampidiranao amin'ny zava-mamy ary asio sira sy diloilo tanamasoandro kely ny sakafo atoandro. Afaka mahandro ny ovy mamy ao anaty lafaoro ianao na mahandro azy ireo.
2 Fa maninona ny ovy mamy no mety hampihena ny lanjany?
3 Toetran'ny ovy
4 Firy kilao no very amin'ny sakafo ovy?
5 Sakafo fisakafoanana ovy
6 Azonao soloina ovy ve ny ovy?
Sakafo maraina: fangaro 1 safidinao (kafe na dite) ary ranom-boankazo voasarimakirana iray safidinao.
Mamatonalina: fampidirana 1 safidinao (kafe na dite) ary biskoy bran 2.
Sakafo atoandro: ron-kena kely 1 kaopy, ny habetsaky ny ovy mamy ary voankazo 1 safidinao.
Ny folak'andro tolakandro: fampidirana 1 safidinao (kafe na dite) ary cookies roa feno voa 2.
Snack: 1 fampidirana safidinao (kafe na dite) ary yaourt ambany tavy 1.
Sakafo hariva: ron-kena kely 1 kaopy, ny habetsaky ny ovy mamy ary voankazo 1 safidinao.
Etsy ambany no hahitanao ny menio amin'ny sakafo ovy mandritra ny herinandro.
Fa maninona ny ovy mamy no mety hampihena ny lanjany?
Ny marina izany ny ovy dia tsara raha mampihena ny lanjany ary ambonin'izany rehetra izany, very kibo. Iray amin'ireo faritra izay mampikaikaika antsika matetika ary tsy mora foana ny midina. Eny, ny ovy mamy dia ho mpiara-miasa matanjaka satria manana indice fibre avo. Izany dia mahatonga antsika ho afa-po amin'ny fandraisana kely azy io. Hihena ny fandevonan-kanina, ka ny fahatsapana ho voky, ho tsikaritray ihany koa rehefa mandeha ny fotoana.
Etsy ankilany, loharanom-pahalalana antioxidant tonga lafatra izy io ary misy index glycemika ambany. Ny marina dia ny ovy mamy miaraka amin'ity index ity ambany be noho ny ovy. Ka mpiara-dia tsara foana. Rahoviana te hihena izahayMila ny haavon'ny glucose amin'ny rà mandanjalanja isika, satria ny ovy mamy no hanao izany ho antsika. Saingy sakafo tsy misy kaloria kely ihany koa misy atiny feno rano, izay manatsara kokoa ny fandevonan-kanina.
Noho ny habetsahan'ny carotenes avo indrindra miaraka amin'ny herin'ny antioxidant dia mahatonga antsika ho iray amin'ireo sakafo tena ilaina amin'ny sakafontsika. Araka ny fantatsika tsara, ny ovy mamy dia misy proteinina voajanahary tsy resy. Fa io koa dia manana fibre isan-jato avo, miaraka amin'izay anaovany azy mineraly toy ny calcium, manezioma, na potasioma, tsy manadino vitamina C. Isaky ny 100 grama ovy, dia miala amin'ny 30 ml amin'ity vitamina ity ny vatana ary koa an'ny E. E. Manome potasioma 480 mg, vy 0,9 mg, fibre 3 grama ary kely koa izy io mihoatra ny 90 kaloria.
Tsy afaka manadino isika, satria niresaka vitamina, izay misy B1, B2, B5 ary B6 ihany koa.
Firy kilao no very amin'ny sakafo ovy?
Ny marina dia sakafo fohy io. Tsy tokony halavaina amin'ny fotoana izy io, satria fantatsika tsara, tsy maintsy mihinana amin'ny fomba voalanjalanja kokoa ianao. Izy io dia mety tsara amin'ny famoizana lanja miaraka amin'ny vavony. Azonao atao ento mandritra ny dimy na enina andro eo ho eo farafahabeny. Raha mbola salama tsara ny fahasalamanao. Amin'izay fotoana izay dia afaka mamoy kilao roa ianao. Fa marina fa ny vatana tsirairay dia samy hafa tanteraka ary hisy olona mety hanana fihenam-bidy miharihary.
Sakafo fisakafoanana ovy
Sakafo maraina: vera ovy misy vera sy voasary roa
Mamatonalina: mofo grama feno 30 grama miaraka amin'ny yaourt skim
Sakafo atoandro: Ovy mamy (ny vola ilainao) miaraka amin'ny lovia salady sy voatabia
Ny folak'andro tolakandro: fampidirana ary mofom-bary roa
Sakafo hariva: ovy mamy miaraka amin'ny crème legioma maivana ary voankazo ho an'ny tsindrin-tsakafo.
Sakafo maraina: vera ovy misy vera, atody nandrahoina ary voankazo
Mamatonalina: mofo grama feno 30 grama misy fromazy maivana 50 grama
Sakafo: puree ovy mamy afangaro amin'ny ronono sotro fihinanana iray sotro sy ronono akoho voatono miaraka amin'ny legioma
Afak'andro tolakandro. Ampidiro ary voamaina 30 grama miaraka amin'ny yaourt skim
Sakafo hariva: ovy nendasina miaraka amin'ny salady sy voankazo
Sakafo maraina: kafe irery na misy ronono an-tsokosoko, 30 grama ny mofo varimbazaha manontolo ary turkis telo na tratra akoho
Mamatonalina: fromazy maivana 50 grama sy voankazo roa
Sakafo: chips ovy mamy na microwaved misy trondro 125 grama sy salady iray lovia.
Ny folak'andro tolakandro: ranom-ovy mamy sy yaourt skim
Sakafo hariva: puree ovy mamy miaraka amina lovia ron-kena kely sy voankazo ho an'ny tsindrin-tsakafo.
Sakafo maraina: fampidirana ovy na ranom-boankazo misy turkey na akoho 5 ary voankazo iray
Mamatonalina: voam-bary 30 grama misy ronono skim
Sakafo atoandro: Ovy sy salady voaendy
Ny folak'andro tolakandro: mofo grama 30 grama miaraka amin'ny fromazy 0%
Sakafo hariva: puree ovy mamy, trondro 150 grama ary yaorta voajanahary.
Sakafo maraina: fampidirana ary cookies roa feno
Mamatonalina: voankazo roa
Sakafo: ovy masaka nahandro atody roa nahandro sy voankazo iray
Ny folak'andro tolakandro: mofo grama 30 grama feno turkey
Sakafo hariva: salady, puree ovy ary yaourt voajanahary
Azonao soloina ovy ve ny ovy?
Na dia fanontaniana iray lehibe aza ny fanontaniana, ny marina dia tsotra kokoa ny valiny noho ny eritreretintsika. Araka ny ny ovy sy ovy dia mitovy. Izany hoe anarana roa ho an'ny tuber iray ihany. Fa marina fa isaky ny toerana dia azon'ny iray amin'izy ireo fantarina izany, izay matetika mitarika fikorontanana. Tokony holazaina fa ny ovy na ovy mamy dia fantatra amin'ny anarana ovy na ovy mamy ihany koa.
Ny marina dia na dia tsy miovaova aza ny sakafo hatrizay, dia ataontsika ilay fanavahana hafahafa ao. Satria manana karazany maro izy ary io no nahatonga ny anarana hanondroana azy ho hafa koa. Ny iray amin'ireo fahasamihafana ireo dia ny loko na ny pulp na ny hoditra. Satria ny karazany miaraka amin'ny hoditra mena dia ilay antsointsika hoe ovy mamy, fa ireo manana hoditra maivana kosa dia antsoina hoe ovy mamy. Noho izany, rehefa te hiresaka ovy na ovy amin'ny sakafontsika isika, dia tokony ho fantatsika fa hanangona ireo toetra tsara sy toetra ary tombontsoa mitovy amin'izany isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Nutri Diet » Vatsim-pivelomana » Sakafo ovy mamy
Raha manana ron-kena marevaka aho, toast 4 ary kafe roa kaopy isan'andro, raha ny marina dia ho fatin'ny hanoanana aho ary izany indrindra no antony tsy ahafahako manao sakafo hampihena ny lanja
Mampihomehy ahy ireto sakafo fihinananao ireto mba hamoizanao lanja anao amin'ny famitahana olona. Aza asiana proteinina sy hydrate izay napetranao tao anaty sakafo hariva dia rehefa matavy ianao ... tsy lazaina intsony ny otrikaina kely nohaninao ... ny zavatra tokana azonao raisina ity sakafo ity dia ny hahafoana ranon-javatra avy amin'ny infusions, manary hozatra amin'ny proteinina kely ary mitafy tavy amin'ny alàlan'ny fametrahana ny hydrate amin'ny sakafo hariva rehefa tsy maintsy nisakafo maraina ianao mba hanananao tanjaka mandritra ny tontolo andro. Efa nilaza izy fa ny olona rehetra dia mpanao sakafo ary noho ireo antony ireo dia manimba ny vatantsika sy ny fahasalamantsika
Inna salazar dia hoy izy:
Eny. … Heveriko fa tsy afaka hihinan-kena mandritra ny herinandro aho fa nisy mpihira nanao an'io sakafo io ary nandeha tsara.
Mamaly an'i Inna Salazar
Fabio Calderón dia hoy izy:
Aiza ny afobe no misy proteinina amin'ity sakafo ity? Marina fa ny ovy mamy dia tena mahavelona nefa tsy maintsy ampifangaroinao amin'ny proteinina, mba tsy hahatonga anao ho adala ny fitaintainana ary avy eo te-hihinana elefanta iray manontolo ... Tsy misy sakafo izay tsy miorina amin'ny proteinina dia tsy misy ilana azy ... Samy mampitombo ny hozatra sy mampihena ny tavy amin'ny vatana
Valiny tamin'i Fabio Calderon